ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
လောလောဆယ်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့ဘဲအလုပ်ခန့်နှင့်အတူအခြားဆိုဒ်များ၌အရှေ့တောင်အာရှ၏။ ထည့်မက်ဆေ့ကိုကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ။ အသစ်အကျွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊ဒီဖုန်းနံပါတ်ကမ်းလှမ်းရန်သစ်တစ်ခုသွားရာလမ်းပူးပေါင်းဆိုက်ဖြန့်ကျက်နှင့်အပေါင်းအရင်းအမြစ်များ။ အခြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများ၊ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမကျေနပ်မှုဖြစ်။ သင်လည်းခံစားမိန်းကလေးများအဘို့အရှာဖွေနေ၏နယူးဓာတ်ပုံများ၊တောင်အာရွလန်၊အွန်လိုင်းချက်တင်။ ဆိုက် ၁၀၀ အခမဲ့မွတ္ပံုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ဆိုက်၊နေ့တိုင်းရှိနေသောသူများ၏အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်အသိအကျွမ်းသော။ ယနေ့သင်ရွေးချယ်ဝန်ဆောင်မှုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း၊တွေ့ဆုံရန်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ဓာတ်ပုံ၊ဖြစ်နိုင်လျှင်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ။
ဘာလဲချိန်းတွေ့? ချိန်းတွေ့ခြင်းတစ်ဦးအဆင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လူသားမြတ်နှစ်ကလူတွေ့ဆုံရန်လူမှုရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအသီးအသီး၏အကဲဖြတ်အခြားအလျော်အဖြစ်အလားအလာမိတ်ဖက်အတွက်ရင်းနှီး ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်။ ဒါဟာ၏ပုံစံတခုဖြစ်ပါတယ်ပိုးပန်း၏ပါဝင်သည်ဟု၊လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်ပြုသောအဆိုပါစုံတွဲသည်၊တစ်ခုခုကိုတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူ။ အလ်နှင့်အလေ့အကျင့်၏ချိန်းတွေ့၊နှင့်တစ်ခုခုချိန်းတွေ့? အကြံဉာဏ်-အရာတစ်ခုခုအမျိုးသမီးရှာဖွေနေချိန်းတွေ့ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်အမိေျဂျုံးစ်ဝတ္ထုကိုအကြောင်းအရူးအကောင်လေးတစ်ယောက်၊မုဆိုးမနှင့်အတူ----ကလေးတွေအမိေျနောက်ကျောချိန်းတွေ့ဈေးကွက်။ မှန်ထဲမှာယင်းွဖက္ရွင္၊သူမသည်မောင်ရရှိတဲ့လူငယ်ပူလူသားအားလုံးနေသော်လည်းသူမ၏လုံခြုံ ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်၏ချိန်းတွေ့ခြင်းသည်အများအားဖြင့်အ ပါဘူးချိုမြိန်ဆုံးလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေသင့်ရဲ့ကောင်လေးချစ်လိမ့်မည်အသီးအသီး၏ဤနှစ်မြောက်တွေးအခေါ်ထားမည်အပြုံးသူ၏မျက်နှာပေါ်။ အဖြစ်အများ၏ဆက်ဆံရေးအနီး၊ကိုရှာဖွေရန်အချိန်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်ပေးမယ်များအတွက်အသင့်ရဲ့ ။ ဒါပေမယ့်၊သငျသညျမရနိုငျုကုန်တိုက်နှင့်ပထမဦးဆုံးဖွင့်ခူးပျင်းစရာနှင့်ရခ်ိဳးျအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အလွန်ဘုံဤသည်နေ့ရက်ကာလနှင့်ပို။အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရှာဖွေဖို့သူတို့ရဲ့စာန်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ။ ဒါပေမယ့်ရှာဖွေကောင်းတစ်ဦးချိန်းတွေ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ ကျေးဇူးတင်ဖို့အကောင်းဆုံးလျချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်၊သင်အလွယ်တကူရှာဖွေအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အကောင်းဆုံးသင်အကိုက်ညီ၊နှင့်၊သင်ဘာလုပ်ပါသည့်အခါသင်၏အလားအလာချိန်းတွေ့၏? နှစ်ဦးမိတ်ဆွေကောင်းနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဆက်ဆံရေးပြဿနာများတို့တည်းတချိန်တည်းမှာပင်။ အဖြစ်မှတ်ချက်၊သူတို့အဘို့အရက်စွဲကာလ။ မေတ္တာသည်အဓိကအကြောင်းမှာလူသားများအနှံ့အချိန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများ။ ဒါဟာတဦးရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာအတွက်တေးဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊ဝတ္ထု
ပထမဦးဆုံးအချိန်မီအကြောင်း၊လူအများကြောက်နေကြတယ်။ အမ်ိဳးညှဉ်းနှင့်အတူကြောက်ရွံ့ခြင်းရှုံးနိမ့်သောအမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုခံစားရ၊ဒါကြောင့်အိပ်မက်အကြွင်းစားတဲ့အိပ်မက်။ သို့သော်၊ဒီအရမည်မဟုတ်၊ ကလပ်အသင်းအတွက်သာမန်အမျိုးသားအပြေးနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ပုံမှန်နိသင်နှင့်အမျိုးသမီးများကြည့်ရှု။ အနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့၏ ယူမှပထမဦးဆုံးအလည်အပတ်အ ကလပ်၊ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်အခြေခံမူကိုနှလုံး၊အမှန်တကယ်ရှိသမျှ ကလပ်-ဟုတ်ကဲ့သောကြောင့်၊သင်ချင်သောဧည့်သည်များလာပြန်သည်။ ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကလပ်သင်တွေ့လိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်လိုလားတဲ့လူရာအားလုံးကိုအဘို့ပျော်စရာစေသည်:၊၊၊ပ်ဥ္ေ။ ပြီး ကလပ်၊စပွန်ဆာ၊အတူလိုက်ပါသူကိုပထမဦးဆုံး ကလပ်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ ရိုးရှင်းအဖြေ:အမြဲသာလျှင်သင်သည်အသစ်ကလေး-ရှိတော်မူသောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစူးစမ်းဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုကူညီအားဖြင့်မသေချာမရေရာ။ သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လမ်းဖြင့်တာဝါတိုင်အထိအားလုံးအဆိုပါဂျာမန်၊တစ် ကလပ်နိုင်အောင်ဆွဲသည့်အခါအခွင့်အပ၊စကားစမြည်ပြောဆိုပြောင်းနှင့်စူးစမ်းရှိမရှိရည်းစားရဲ့ သွားလိမ့်မယ်သူတို့နဲ့။ ဤသည်၊အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ၊တစ်ဦးအနည်းငယ်သာသည်းခံခြင်း၏တစ်နည်းနည်း တစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်-ဒါပေမယ့်လူအတော်များများရှိပါတယ်ရင်ဆိုင်ခြင်းနေသောအတူတူပြဿနာကို။ လာစုံတွဲများ၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ။ ၏ကလပ်အသင်းပူဇော်နှင့်လည်းညနေခင်းများအတွက်စုံတွဲများနှင့်ကိုယ်တော်မင်းသမီး။ အားလုံး လာအလားတူအကြောင်းရင်းများကြောင့်:လိင်ရှိသည်ရီ၊ရီသို့မဟုတ်ရုံမှာဘားပျော်မွေ့ရန်။ အမျိုးသမီးမကြာခဏလစာအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမဝန်ခံ၊ဒါပေမယ့်အစားအစာနှင့်အချိုရည်အဖြစ်အားလုံးအခြားသူများ။ တိုးမြှင့်အချိုးအမျိုးသမီးများအတွက် ကလပ်အသင်း။ အစွန်အဖျားများအတွက်လူပျိုအမျိုးသမီးဘယ်သူမယုံကြည်မှုအတွက်၊သင်ပတ်လည်ကြည့်ရှုရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခင်သင်ဘာလုပ်နေကြ။ သို့မဟုတ်တစ်ရည်းစားသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုယူ။ အပင္ေနယူးတစ်ခုတည်းယောက်ျားလစာသိသိသာသာပို။ ရလဒ်အနေနှင့်၊အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးပေါက်အတွက်ကလပ်အသင်း။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊နည်းဥပဒေများ၏အထက်လူကြီးလူကောင်း။ စုံတွဲများ။ အကောင်းဆုံးကတော့၊မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သင်လိုလွှဲလိင်ကစားများ၏ရှေ့မှောက်၌အနည်းငယ်ပရိသတ်သို့မဟုတ်ပင်အနည်းငယ်အ ။ အ နှင့်အတူကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမှအနောက်တံခါးအထက်ကိုပိုပြီးလိင်အကြားအမျိုးသားများအသွား၍ထိုအခါ၌အခြားကလပ်အသင်း။
သင်စိုးရိမ်မှု၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြဿနာများ၊လိုအပ်တစ်စုံတစ်ယောက်မှနားထောင်။ ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ကျိုးပဲ့မဟုတ်၊ဒါကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်အတွက်ကျောင်းအတွက်လေ့လာ၊ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သင့်အလုပ်။ ကိုယ်မပင်ဆင်းရဲခံရမများနှင့်အတူရဖို့သင်၏လက်ရှိအသက်တာ။ ဒါဟာဘာအရေးမပါဘူးနှင့်သင်အနှောက်အယှက်သို့မဟုတ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်၊အရေးအကြောင်းပြောဆိုသူပြဿနာများ။ မကြာခဏကြောင့်လည်းကူညီပေးသည် ရိုးရိုးရှိသည်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးသင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုအခြေအနေအပြင်ဘက်မှ၊ဤသို့တတိယအမြင်။ ဒီတော့ဖြေနိုင်တယ်။ သူမ်ားေရှာကြံမှုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုချက်တင်တြင္ကိုကူညီမင်္ဂလာ။ ကျနော်တို့အတူမိတ်ဆွေတစ်ဦးအတွက်၊သင်နားထောင်ဖို့။ တစ်ခါတစ်ရံအဖြေတွေ့နိုင်ပါသည်၊ထိုသို့မှန်လျှင်၊အဘယ်ရွေ့တစ်ခု၊အခြားတစ်ဖက်တွင်နေစဉ်၊သူတစ်ဦးသည်နားထောင်ခြင်း။ ထိုအခါညာဘက်လမ်းသည်မကြာခဏပြီးသားအပေါ်လက်။ ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းပြီးသားကူညီပေးခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီး။ ဒီနေရာမှာ၊သင်ကောင်းသောလက်၌။ ကျနော်တို့ချင်ပါတယ်ကဲ့သို့မှအပြုံးတစ်ခုရောက်စေဖို့သင်၏မျက်နှာ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုအလွန်လူတို့နှင့်အတူအဘယ်သူသင်တိုက်၊အတူတူသင့်ရဲ့ဝမ်းနည်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြ၊ကောင်းစွာအနက်အဓိပ္ပာယ်အကြံဥာဏ်ကြကုန်အံ့သင်ပွင့်ဆောင်သို့မဟုတ်အကူအညီအတွက်အခြားသူများခက်ခဲတဲ့အခြေအနေ။ မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သင်လိုကြောင်းပြောဆိုသင့်ရဲ့ပြဿနာတွေ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဒီမှာ ရှုပ်ထွေးခြင်းအခွင့်အလမ်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုချက်။ ပူးပေါင်းတစ်ဦးစကားလက်ဆုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများသို့မဟုတ်အတွေ့အစိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆိုမှုအဖော်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောကမ်းလှမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်သို့မဟုတ်ကုထုံး၊ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တိုင်ပင်ဖို့သင်ကူညီလိမ့်မည်အနာလန်ထူဖို့လမ်းမ။ အများအားဖြင့်အနည်းမှန်လမ်းမှန်ပြီးသားအပေ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရှုထောင့်အမြင်ပါ။
နွေရာသီကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်၊အချိန်ရဲ့စဉ်းစား။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ကမ်းခြေသှားဖို့အချိန်နှင့်သွားကြဖို့နိုင်ရန်အတွက်ပင်ပိုမိုဆိုးရွားသည်၊သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ်ယူ၊သင်အလိုမဟုတ်လျှင်ပုန်းဖို့တစ်ခုခု။ ယူချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပြုမိန်းကလေးအသဲ၊ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးအရာသင်ပြုလိုအပ်သည်အားကစားရုံကိုသွား။ ငါမပြောမဆို။ ပြုပြင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်။ စတင်လျှင်ဧပြီလအတွက်၊သင်တန်းအလုပ္ကျလိမ့်မည်ပေါ်အလုံခြုံဇူလိုင်လခြေရာခံ။ ငါသေချာပါတယ်သင်စေပါလိမ့်မယ်အများကြီးပိုကောင်းခံစားရထက်ငါနောက်ဆုံးညကိုပြု။ ဘယ်မှာသင်ကြည့်ရှုသူ့ကိုဆုံးရှုံး? ဆင်းတွင်အလှပြင်ဆိုင်၊တစ္ဖက္လူေျ၊ငါ့မိတ်ဆွေ။ ဒါဟာ ဒါဟာနာကျင်စေနိုင်သည်၊ဒါပေမယ့်သာတစ်ကြိမ်မှာရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်ပြီး၊အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များအဆက်မပြတ်ရိတ်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ဆွဲသူတို့ကိုယ်သူတို့အတူတူ။ ေခန္း၊မကြာခဏလည်းမရှိကွောငျးထားတဲ့ဧရိယာထွားရန်လိုအပ်သည်၊နှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပါဘူးမျက်ရန်သင့်မိခင်သို့မဟုတ်အစ်မခွဲ(ခါလည်းမဟုတ်သင်၏အဘ)ကို၊ထိုသို့ပြုနှင့်အတူအိမ်မှာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး။ ဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာနှင့်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဖို့၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု။ ဒါကြောင့်၊ပထမဦးဆုံး၊သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊သင့်ရဲ့ဆံပင်အကောင်းပုံသဏ္ဍာန်အတွက်၊စဉ်းစားရန်အများအစြက္ေဆးမ်ားအလှပြင်ဆိုင်များအတွက်အစည်းအဝေးလျှင်မော။ ကမ်းခြေသွားနှင့်လိုက်ရှာကာသမှမအေးမြနှင့်လည်းမဟုတ်အမှုရတဲ့၏တစ်တန်ဖြုန်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အစည်းအဝေး။ စြက္ေဆးမ်ားနှင့်အချို့သောအစည်းအဝေးများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အသားအရေများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သားေဖြစ်ရလိမ့်မည်ခြယ်ပစ္စည်း(ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဝေဖန်၊ကျွန်မကပြောသည်င်)။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အဖြစ်မကြာခဏအပြည့်အဝမိန်းကလေးငယ်များ၊နှင့်မကြာခဏကပဲအတိုင်းငြီးငွေ့ဖြစ်။ ဒါဟာအကြောင်းပြောဖို့လုံခြုံသောကမ်းခြေတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအရပ်၊အဲဒီခါကျွန်တော်တို့လူမှာ၊လမ်းပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ ဒါပေမယ့်အသဲနာရီကစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်သာ။ ပေမယ့်အများအတွက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ဆိတ်ငြိမ်သောအိပ်စက်ခြင်း။ မရှိပါ၊ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊မိန်းကလေးများအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်သင်လမ်းလျှောက်ဖို့နဲ့စကားပြောရင်တောင်၊ဒါဟာတတိယအလက်။ ပထမဦးဆုံးအရာဆိုလိုတာကကမ်းခြေအများအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာနှင့်ပြည့်စုံသည်လူတစ်ဝက် ၊ဝက် ၊ဝက်အနေရောင်ခြည်နှင့်တစ်ဝက်အိပ်ပျော်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာရှိသည်တစ်ဦးအထင်အမြင်ထားခဲ့ဖို့၊ဒီအဖြစ်ပျက်အချို့နှင့်အတူချဉ်းကပ်ဖို့အမှုအရာ။ ဒါကြောင့်၊လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာသည်ရေကူးကဲ့သို့မှမထွက်ခွာရန်ဒီနေရာ။ အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏အလို၊လူမမြင်ခဲ့ကြသောရင်သားကင်ဆာ။ ည့္ရေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်၊အတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ဦးမိန်းမရေကူးဝတ်စုံသူမ၏ပြသ။ မခံစားရလမ်းကိုသင်၊သင်တန်အမြဲဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမဲ့သူမဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအားလုံးအတူတူပါပဲ။ နိုင်ဖို့အတွက်အပြုံး၊မချည်းမသွားစေ၊သင်လိုအပ်ကိုချက်ချင်းငြင်းအခုံ။ မလိုက်မသွားနှင့်ဟုဆို"မင်္ဂလာပါ"အတွက်အထွေထွေနှင့်သာယာသောစကားပြောဆိုခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်နားထောင်ဖို့ပြောရ အားလုံးအကြံပြုချက်များကြောင်း၎င်း၏ရရှိမှုနှင့်အကျိုးစီးပွား။ အိုး၊ထိုအခါသောလမ်းဖြင့်၊သင်ကိုင်သင့်ရဲ့အစာအိမ်နှင့်ရှူရှိုက်တိမ်၊သင်သိသင်ကြည့်ရှုအရူးတစ်ယောက်လိုပဲ။ နဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်သင့်ကိုယ်ပိုင်သားေရင်းသင့်သည်ထက်၊မေ့လျော့။ မူပိုင်ခွင့်(ဂ)ချက်တင်ကစားတဲ့။ ဘလော့ဂါတင်းပလိတ်များဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်သမိုင်းတင်းပလိတ်များ။ အပေါ်အခြေခံပြီးဒီဇိုင်း၏ဓာတ်ပုံဘလော့ဂ်။
ဗီဒီယိုစကားပြောသည်လူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုတို့တွင်ယောက်ျားနှင့်ရုရှားအမျိုးသမီးဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ချက်တင်။ အတူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအမျိုးသမီး ကနေယူကရိန်းနှင့်ဆက်သွယ်မည်သည့်အချိန်။ ချိန်းတွေ့စကားပြောပေးနှစ်မျိုးစလုံးအ ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုနားလည်လျှင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်လက်တန်ဖိုးရှိ။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သင်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှု။ ဖြုန်းမယ်ဆိုရင်အချိန်နာရီတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့စကားပြောဆိုအတူတစ်ယောက်တစ်ပတ်အတွင်းရရှိမည်၊သငျသညျအခမဲ့ဓာတ်ပုံအကြွေး။ တချိန်တည်းမှာကျနော်တို့ကပေးလိမ့်မည်အဆိုပါမိန်းကလေးနှင့်အတူမိနစ်အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ားသင့်ကိုယ်စား။ အခါသင့်ရဲ့မိန်းကလေးရှိသည်လိမ့်မည်နာရီသင္ခန္းစာမ်ား၊သူမကစတင်နိုင်လိမ့်မည်သူမ၏သင်ခန်းစာများကို။ အချို့သောအချိန်သူမနိုင်ပါလိမ့်မည်ပြောဖို့အတွက်ဗမာ၊ဒါကြောင့်မဖြစ်ကြောက်မက်ဘွယ်? ထိုစဉ်အတွင်းဗီဒီယိုချက်တင်အစည်းအဝေးတွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်ရုရှားသမ္မတဝဘ်ကနေတဆင့်ဖုနှင့်အမျိုးအစား၏သတင်းစကား။ အမှန်ပင်၊ကြည့်ရကျိုးနပ်သည်ထောင်စကားသည်။ သို့သော်သင်စရာမလိုပါလျှင်တစ်ဦးကမ်၊သင်ဆဲသုံးစွဲဗီချက်တင်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်သင်အမျိုးအစား၏၊မက်ဆေ့ခ်ျများ၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သင့်ရဲ့မိန်းကလေး၊ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးအများတွေ့မြင်မည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်လည်းပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊သငျသညျအစဉ်အမြဲပေးပို့နိုင်ပါတယ်၊သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံများမှတဆင့်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊သူမရှိသည်လိမ့်မည်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးက အသွင်အပြင်။ အဆိုပါဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုပါဘူးထောက်ခံမှုအသံဖလှယ်၊ဒါပေမယ့်ဒီအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်။ သင်ဘယ်တော့မှစိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်မှာစကားပြောဖို့သင်၏မိန်းကလေးကြောင့်၊သငျသညျအစဉ်အမြဲအချိန်ရှိသည်ဖို့အထင်ကျော်၏စကားအ၊သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်သင့်ရဲ့မိန်းကလေးနေစဉ်သူမသည်အဆုံး။ သင်ပျော်မွေ့ဖို့အချိန်ရှိသည်သူမ၏အလှအပနှင့်။ သင်စကားပြောနိုင်မှာဗီဒီယိုချက်တင်အဖြစ်အများအပြားအချိန်အဖြစ်သင်ဆန္ဒရှိ။ ဒါဟာတကယ်လိုအပ်သည်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအချိန်ဖြုန်းဖို့အတွက်အသံုုးခ်။ သင်လုပ်နိုင်အရေးတွေအများကြီး၏အီးမေးလ်၊သင်မူကား၊နားလည်သဘောပေါက်နိုင်လျှင်သင်နှင့်သင်၏အမျိုးသမီးပွဲစဉ်အဖြစ်ကောင်းသာမြင်သီးအသီးအခြားဖြင့်ကမ်။ အရာအားလုံးအရေးကြီးပါသည်၊မည်သို့လှုံ့ဆော်နှင့်အပြုံး၊ဘယ်လိုပြုမူနှင့်ဓာတ်၏စကား။ ဤသည်အကောင်းဆုံး"အစမ်း"မီ၏ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့စကားပြောအစည်းအဝေးများအတွက်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ချက်တင်အမှန်တကယ်လုံခြုံ။ သင်ဆက်သွယ်ရေးတင်းကျပ်စွာလျှို့ဝှက်ထား။ ဘယ်သူမှသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုအပေါ်အင်တာနက်သို့မဟုတ်ပေးရန်ဝင်ရောက်ဖို့သူတို့ကိုအခြားလူများ။ သင်သေချာသင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးလိမ့်မည်သာ ၏။ သင်နှင့်သင်၏ရုရှားမိန်းကလေးလည်းမလဲလှယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အတွင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်းဆန့်ကျင်လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များ၏ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အာမခံသင့်နဲ့သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွင်းသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယို။
ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ခာက္ဦးသည်"ရော၊အသစ်ချိန်းတွေ့၊မိသားစု၊အိမ်ထောင်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကို၊စသည်တို့ကို။"ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခရီးသွားလိုသူများအတွက်ရှာဖွေပုဂံခရီးသွားဖို့နိုင်ငံနှင့်အမြို့မြို့။ သင်သည်လည်းရှာခြင်းအားဖြင့်ကျားမနှင့်အသက်အသုံးပြုပုံရှိရာနေရာများသင်တိုက်ရိုက်နှင့်ခရီးသွားလာ။ ဤစာမျက်နှာတွင်အောက်ပါအဓိကကဏ္ဍ:"ရှာ"၊၊"ကေးရှင်း"။"ဆက်သွယ်ရေး"အပိုင်း၊သင်သာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်တဲ့ပန်းနှင့်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ချက်တင်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။"ကေးရှင်း"အပိုင်းများပါဝင်သည်၊အောက်ပါကဏ္ဍများဆိုက်:ဂိမ္း၊ခရီးသြားကိဳသုတေသနခရီး၊အမျိုးမျိုးသောပြောင်စာမေးပွဲကို၊နှင့်ကံဇာတာပြော။"အရီး"အပိုင်းပါရှိသည်ဖော်ပြချက်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသော။ အလွန်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိတစ်ဦးတစ်ယောက်၊အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့ရှာသောသူအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး သာေႏ။ သင်အလေးအနက်ကိုရှာဖွေတစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊သင်ကကြိုးစားသင့်တဲ့အသေးစိတ်အရိုရှာစာမျက်နှာနှင့်အတူအဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများရွေးချယ်ခြင်း"အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဆက်တင်များ"နှင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုပြသသောသူအလေးအနက်နှင့်ပတ်သက်။ ဒါ့အပြင်၊မှကြွလာသောအခါရှိမရှိဒီအပြန်အလှန်အလေးအနက်မ။ သင်သည်လည်းမျှော်လင့်သည်ဟုသင်ခံစားရနိုင်ကလည်း၊သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်၊ချက်ချင်းခံစားရရှိမရှိကိုအားသွင်းချိတ်ဆက်သောတပ်ဆင်ခ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ဒါကြောင့်ပေါ်လာမှလူသိများအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ခာက္ဦးအဘို့အချိန်းတွေ့အတွက်နီးပါးအတူတူ၊ဒါပေမယ့်လည်းအရပ်၏ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖလှယ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ ဒီနေရာမှာ၊ယာဉ်အသွားအလာအတွက်ဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသည်မဖြစ်၊ဒါပေမယ့်လည်းလွှတ်ပေးရန်တစ်ဦးချောမွေ့လာ၏ပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊ဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား၊ပိုပြီးလူအမြင်ဆိုက်အဖြစ်အသက်ရှင်မိသားစုထုတ်လုပ်နှင့်အံ့သြဖွယ်။ အဲဒါလှတယ်။ မဆိုအမှု၌၊သင်သည်အဘယ်သို့လိုအပ်ရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်၊ထို့နောက်များအတွက်အသိအကျွမ်း၊ဒါကြောင့်သင်မြင်သဘောပေါက်လူအများ၏အိပ်မက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် ဥပမာအားဖြင့်၊အခမဲ့ဓါတ်ကိုပြန်လည်ခာက္ဦးကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖွင့်၊ခွင့်ပြုသောကြောင့်၊သုံးစွဲဖို့သင်ဖို့အများအပြားဆိုက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်။ အခမဲ့ချပ်စာပေးစာအတွက်အသေးစိတ်အရိုရှာသောအချိန်အတွက်ဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ဆက်သွယ်ရေးအွန်လိုင်းအခမဲ့။ သို့သော်၊အချို့ဆိုဒ်များကိုပူဇော်အဖြစ်ငွေပေးချေမှု၊ရက်ရော၊အဖြေပရိုဖိုင်းအတွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို၊နှင့်အသွင်။ ကတည်းကရန်ပုံငွေများ၊ဥပမာအားဖြင့်၊အခေါ်"အတိအကျ"၊အခကြေးငွေအခမဲ့နှင့်အခုထိအစအဆုံး။ ဤသည်ကိုလည်းတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူတိုတောင်းတဲ့ဖော်ပြချက်။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ကျနော်တို့ရှိသည်သောပစ္စည်းနီးပါးအစဉ်အမြဲပေါ်တွင်တင်ထား။ သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အထသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှာစာတန်းပါ"ပြဿနာ"။ လုံးဝအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပညာမရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်သင်သည်လည်းဖြစ်မှတ်ပုံတင်အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူအင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါနှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအတည်ပြုလင့်ခ် အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်အလက်လိုအပ်သည်အားဖြင့်ဆိုက်၊သငျသညျအီးမေးလ်ပေးပို့လိပ်စာသို့မဟုတ်။ သငျသညျအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါ်နေ့ ၁၀ ၃၁ ၂၀၂၀။ လျှင်သင်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အချက်အလက်ကကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊မျှဝေကျေးဇူးပြုပြီးအဆိုပါအချက်များသင်အကြောင်းသိထားသင့်အသိအကျွမ်းများ၊မိတ်ဆွေများနှင့်လူမှုကွန်ယက်များ။ ကိုင္ရို-ထိုမြို့၏ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ရစေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမြင်ကြပြီအများကြီးနဲ့တူ-စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေအတွက်မြို့နှင့်အများကြီးပို။ ပိုပြီးအသေးစိတ်ရိုရှာ။
သူတွေ့ဆုံလှပသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖို့လိုလားနှင့်လက်ထပ်ရန်အတွက်သန့်ရှင်းသောမင်္ဂလာ။ အကယ်စင်စစ်။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်များအဘယ်ကြောင့်တရုတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အနိုင်အလွန်ကြီးစွာသောမယား။ အာရှသတို့သမီးဖြစ်လာကြပါပြီအတော်လေးရေပန်းစားနှင့်အတူအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။ အများအပြားသင်အခုလက်ထပ်ဖို့တရုတ်အမျိုးသမီး။ သင်သည်အစဉ်အဘယ်ကြောင့်အံ့ဩဖူး? ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံထက်ပိုကောင်းအမျိုးသမီးအတွက်အခြားနိုင်ငံများ။ ဒါပေမယ့်အလျှင်အနောက်တိုင်းလူလိုသူချိန်းတွေ့ဖို့တရုတ်အမျိုးသမီး၊သင်တွေ့လိမ့်မည်ဒီလမ်းညွှန်အသုံးဝင်သော။ တရုတ်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့လွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများကြောင့်နက်နဲသောအရာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်၊ထိုအမျိုးသမီး။ ထို့နောက်မှီ၊အဘယ်သူမျှမကြီးမြတ်ဆက်ဆံနှင့်အတူ။ ကြောင်း၊လူတွေ၊အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ၊အဆဲအနည်းငယ်သာသိကတရုတ်နိုင်ငံနှင့်၎င်း၏အဆင်းလှအမျိုးသမီး။ အများစုကယုံကြည်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်မစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွကွန်မြူ။ ဤသည်မှာလုံးဝမမှန်ပါဘူး။ မှန်ပါတယ်၊တရုတ်နိုင်ငံရှိကွန်မြူနစ်အစိုးရ၊ဒါပေမယ့်လျှင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ငံ၊သင်အံ့သြသွားလိမ့်မည်၎င်း၏တန်ဖိုးများနှင့်အလုပ်ကျင့်ဝတ်နှင့်မလွန်သူတို့အထဲကကွဲပြားခြားနား။ တရုတ်နိုင်ငံသည်လူဦးရေအများဆုံးကမ္ဘာ့နိုင်ငံ။ ဤနေအိမ်များအတွက်ပို။ ဘီလျံလူမျိုး၏။ ဒါကြောင့်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသင်ရှာရန်အဘို့အအမျိုးသမီး၏အိပ်မက်များ၏အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်။ တရုတ်အမျိုးသမီးများမှာလည်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ သူတို့ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်ထက်ပိုမြင့်မိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံ။ သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်အစကနေကွဲပြားခြားနားကြောင်းမျိုးသမီးများအတွက်ဤနိုင်ငံ။ တရုတ်နိုင်ငံရှိအကြီးမားနယ်မြေ၊နှင့်ပထဝီမတူကွဲပြားမှုများလည်းပေးသည်သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးထူးခြားကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်။ ဤသည်အလွန်အအပြုသဘောအခိုက်အဘို့အချိန်းတွေ့တရုတ်အမျိုးသမီး။ အမျိုးသမီးအတွက်တရုတ်လည်းအများအပြားအကောင်းအလေ့အကျင့်များဆွဲဆောင်မှုအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာမသောက်သို့မဟုတ်အခိုး။ ဒီမကောင်းတဲ့အလေ့အထနှင့်သူတို့မစဉ်းစားပုံမှန်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ သို့သော်အာရှအမျိုးသမီးမ မားတက်တူးလုပ်အားဖြင့်တစ်ပိုက်ဆန်လျှော်ထရပ်ကား၊အားလုံးခန္ဓာကိုယ်အပေါ်၊ဒါကြောင့်စဉ်းစားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ရှိသည်။ သူတို့ကလည်းလုပ်လေ့ကိုယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းသော။ ကောင်းစွာအစာစားခြင်းကနေကွယ်ပျောက်နေဖို့အစုတ်အစားအစာ။ သင်နဲ့မတူစွဲလမ်းစြက္ေဆးမ်ားသင့်ခန္ဓာကိုယ်။ အများစုနေထိုင်အဖြစ်ဝေးဝေးနေအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ဤကောင်းသောအလေ့အကျင့်အတွက်ဆက်ဆက်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်။ အများအပြားသင်ကနုပျိုကြည့်ရှုထက်သင့်ရဲ့အမှန်တကယ်အသက်အရွယ်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်ချိန်းတွေ့တရုတ်မိန်းကလေးများသည်အလွန်ရေပန်းစားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်။ တရုတ်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့အကောင်းတစ်စိတ်ကူးကြောင့်ဤအမျိုးသမီးများမှာသစ္စာနှင့်ချစ်သူတို့အမ်ိဳးခ်စ္ေ။ တကယ်တော့၊အများဆုံးများအတွက်၊သင်၏ခင်ပွန်း၏အလယ်ဗဟို။။။။။ ဒီတော့လျှင်သင်လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းများမှာအကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေတရုတ်အမျိုးသမီး၊သင်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်သောသင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းအမည်နှစ်အတွက်သူမ၏မေတ္တာနှင့်နူးညံ့ကြင်နာ။ အခွံသင်ချစ်သလောက်ချစ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိခင်။ တရုတ်အမျိုးသမီးများကိုမိသားစုအတြက္ဦး၊နီးပါးအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့သင့်မိသားစုများအတွက်နှင့်ခင်ပွန်း။ ချိန်းတွေ့တရုတ်အမျိုးသမီးသည်အလွန်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်၊ သောကြောင့်သူမအပေါ်သစ္စာ။ သင်သည်အစဉ်အဆက်ရှာတွေ့ဖို့အခွင့်အပူးပေါင်းဆောင်၊သင်ပြုလိမ့်မည်ဒါကြောင့်အကျိုးအတွက်သင့်မိသားစု၏။ အပြင်၊သူတို့တွေဟာအတိအကျ ။ ပေမယ့်အများဆုံးအမျိုးသမီးများမှာယနေ့ကြှနျုပျတို့နှင့်အတိအကျမချက်ပြုတ်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းရေး၊အာရှအမျိုးသမီးများတိုးတက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အိမ်မှုဝေယျာနှင့်ဂရုစိုက်သူတို့ရဲ့မိသားစု။ လျှင်သင်လက်ထပ်တရုတ်အမျိုးသမီး၊သင်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်အလုပ်လုပ်အိမ်တော်ပတ်လည်။ ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူမသည်အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျစီစဉ်၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူ၏စောင့်ရှောက်မှုယူသင့်အိမ်နှင့်သင့်မိသားစု။ အာရှအမျိုးသမီးလေ့ရှိနေဆဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတလျှောက်လုံးကသူတို့ရဲ့တစျခုလုံးကိုဘဝတွေကို။ သူတို့၏ပိုကောင်းဂရုစိုက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်။ ရှိခြင်းအရှက်တကွဲအသွင်အပြင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်စဉ်းစားသည်အရှက်လျှင်ပင်၊သင်အောက်ဖိများ၏လုပ်၊ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီး၏ပုံနှင့်အတူ။ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊ထိုအခါတရုတ်အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအောင်များအပြားအသုံးဝင်သောအဆက်အသွယ်အတွက်ဒီနိုင်ငံ။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊သင်အများကြီးရှိသည်ရွေးချယ်မှုများလျှင် သင်ဟောပြောကြသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုဒီဘာသာစကားခြစ်ရာကနေအတော်လေးစျေးကြီးဖြစ်နိုင်။ လျှင်သင်၏မယားသည်အာရှ၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးငှားရမ်းဆရာတိုးတက်လာဖို့သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု။ တရုတ်နိုင်ငံသည်ကြွယ်ဝ။ လျှင်သင်လက်ထပ်တရုတ်အမျိုးသမီး၊အခွံသင်ကူညီလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒေသခံယဉ်ကျေးမှု။ အခွံလည်းရှောင်ရှားကူညီပေးသည်များအပြားယဉ်ကျေးမှုနားလည်မှုလွဲစေနိုငျသောအဓိကအကြောင်းရင်းမှာအရှက်။ အာရှအမျိုးသမီးကြီးရှင်။ ရင်တောင်အလုပ်အပြည့်အဝ-အချိန်၊အခွံကိုသေချာအရာအားလုံးစနစ်တကျဖွဲ့စည်း။ ရလဒ်အနေနှင့်၊သင်အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းရှိပါတယ်၊အများအပြားအားသာချက်များ၏လက်ထပ်တရုတ်အမျိုးသမီး။ ဒါတွေဟာကိုယ့်တချို့ရှိနေပါတယ်အသိသာအားသာချက်များ။ ရှာတွေ့အများကြီးပို။ ဘာသာစကားဟာအကြီးမားဆုံးပြဿနာအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများမျက်နှာကိုရှာဖွေသောအခါသတို့သသွားဖို့တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာတော့၊အခြေအနေတိုးတက်လာခဲ့ပြီ။ လူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူလုံလောက်တဲ့ကောင်းသော ဗမာ။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးအများစုအတွက်ကျောင်းများ၊တရုတ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘယ်သူသည်အဂၤလိပ္စယခုအကောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလားအလာ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ယခုအခါလြယ္ကူစြာရွာေဖြတဲ့သတို့သမီးနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦး၏အသိပညာဗမာ။ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီတစ်ဦးသတို့သမီးအပေါ်တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊သင်သည်လည်းကြိုးစားသင်ယူဖို့အနည်းဆုံးအချို့အမှုအရာအကြောင်းကိုတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနည်းလမ်းများစွာအတွက်။ အများစုအတွက်အာရှနိုင်ငံများ၊တရုတ်အပါအဝင်၊သက်ကြီးလူများနှင့်အတူဆက်ဆံကြီးလေးစား။ သားသမီးရသည့်ပညာရေး-ဤများမှာလည်းကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ။ အာရှကလေးများလျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့အထက်ဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန်။။။။။ ထို့အပြင်၊သူတို့များသောအားဖြင့်အသက်ရှင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိဘများပင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်။ အရာအားလုံးကိုဖတ်နိုင်ပါကတရုတ်လူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏နိုင်ငံအယူရှာဖွေနေရှေ့၌တစ်ဦးသတို့သမီးအပေါ်တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တရုတ်တစ်ဦးတစ်၊ကျနော်တို့ကူညီလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးချက်များနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာလှတစ်ဦးတစ်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ အာရှနိုင်ငံများ၊တရုတ်အပါအဝင်။ ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုရှာတရုတ်တစ်ဦးတစ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါစေပွားပြည်ပ။
ဗီဒီယိုရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်မိန်းကလေးများချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အားဖြင့်ရှာ။ ဘယ်မိန်းကလေးမှကြွေလစ်တွေ့ရသည်။ သူသီချင်းစာသားကိုဒီသီချင်း? ကတုန်းလှန်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒသတ်မှတ်ချက်များချောင်းကိုဒေါင်းလုပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊မဂ္ဂဇင်းများ၊ဂီတဗီဒီယို၊ဓါတ်ပုံအဆင့်မြင့်တရုတ်သတင်းလူမာ္ေတာ္ကားမ်ားဇိမ်ခံမယ်၊အလုပ်အကိုင်ရုပ်ရှင်အိမ်ခြံမြေလမ်းညွှန်ချက်ပစ္စည်းတွေ၊အန္တရာယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏။ အခါ ဖို့ကမ်းလှမ်းထား၏သူမ၏သမီးအပေါ်အခမဲ့များအတွက်ပိုကောင်းလာရန်နေအိမ်ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊သူမကပင်ပူဇော်ဖို့ယူမိန်းကလေးမှလေဆိပ်။ တရုတ်နိုင်ငံကဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူသည်၊ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းချိန်းတွေ့စျေးကွက်သည်နှေးကွေး။ ငါတစ်ခုတည်းလေးနှစ်အဘို့၊ငါ ငါလက်ထပ်၊နှင့်ဟုသူကညည်းညူ။ တရုတ်နိုင်ငံချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူတရုတ်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံကအသစ်၊စုံ-စာမ်က္ႏွာ၊ဘီချိန်းတွေ့ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အသစ်ရင်းနှီးချိန်းတွေ့ဆော့ဖ်ဝဲကို။"တရုတ်ချိန်းတွေ့"၊။ တရုတ်အချစ်သည်အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဒါင္းတရုတ်တစ်ဦးတစ်။ တရုတ်နိုင်ငံကင္ယာဆုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ၾကင္ယာတရုတ်နိုင်ငံသည်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ခုတည်းတရုတ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း။ တွေ့ဆုံလှပသောအမျိုးသမီးနှင့်ပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ နိမိတ်လက္ခဏာတက်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူလှပသောလူမှတရုတ်နိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဗီယက်နမ်နှင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများ။ ဘေဂျင်း-တရုတ်အမွတ္အသားလံုျခံဳေရးပညာေရးနေ့နှင့်အတူသတိပေးပိုစတာငယ်ရွယ်အစိုးရအရာရှိချိန်းတွေ့အကြောင်းအဆင်းလှသောလူငယ်နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးမတတ်နိုင်မဖြစ်စေခြင်းငှါစောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်များ။ နာမတော်နှင့်အတူ။ ရောဘတ်တရုတ်ချိန်းတွေ့၊အလေးအနက် အတရုတ်၊သို့မဟုတ်တရုတ်မိန်းကလေး။ နှင့်အတူရောဘတ်တရုတ်၊သင်၏သုတေသနပြုပါ၊သတင်းနှင့်စကားပြောနှင့်အတူအများအပြားတရုတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသီးအသီးအခြား၊အထူးသဖြင့်။ တရုတ်နိုင်ငံကင္ယာဆုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ၾကင္ယာတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအတူတကွတစ်ခုတည်းတရုတ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း၊ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတရုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်။ -အဟောင်းနယူးယောက်ဆိုးဖမ်း-ကြွင်းအလွန်ရေပန်းစားခြောက်နှစ်အပြီးနောက်သူ၏ပထမဦးဆုံးအသွင်အပြင်၌တရုတ်နိုင်ငံ၊အဘယ်မှာရှိသူ၏ပရိသတ်အတွက်ဘေဂျင်းသုံးမားစက္ကူ သူ၏မျက်နှာအတွက်အတိုကောက်။ ပေါ်ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည်အခါသူကစတင်ချိန်းတွေ့ ။ ဒီစုံတွဲရက်စွဲနှင့်ဆွဲထားအတွက်အရင်နှစ်တက်ခြိုးအဘို့အကောင်း။ အမွှာနှစ်ဦးတူညီသမီး၊ခဲ့့ယာကုပ်နှင့် ၊နှင့်။။။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်နေသောလူများအတွက်ရှာဖွေနေအတွက်ရေရှည် ၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ ဤကွီးစှာသောအခွင့်အလမ်း၊ပိုကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်သင်၏တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲ၊မဒီအခွင့်အလမ်း။ လည်း၊သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုသုံးနိုင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ရှာဖွေရန်သူငယ်ချင်းများကိုယ့်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးတစ်ခုခု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံအီးမေးလ်စနစ်ပေးသည်တြထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေအများ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအခြားအဖွဲ့ဝင်မှဘုံတွင်တစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊သူ့လူ။ ကြီးမားတဲ့အပေါင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအိတ်၊ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများ၏နာရီနေ့ရက်နှင့်ရက်ပေါင်း၏။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်၌ရှိကြ၏နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊အင်တာနက်။ ထို့အပြင်၊အသုံးပြုသူအပရိုဖိုင်းကိုကူညီ၊အကျိုးစီးပွား၊ ဦးစားပေး၊မိသားစုအဆင့်အတန်း၊နှင့်အခြားအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်ကလူတစ်ဦးအကြောင်းထွက်ရှာဖို့သင်၌စိတ်ဝင်စားကြ။ မူဝါဒကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်ကကျွန်မတို့ရေရှည်ချိန်းတွေ့နှင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ဘယ်သူသိ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တွေ့လိမ့်မည်သင်၏မေတ္တာနှင့်စတင်တစ်ဦးမေတ္တာဇာတ်လမ်း၏တိုက်ရိုက်အတိအကျကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ကြည့်သင့်မြေးအပေါ်သင့်ရဲ့ဒူး၊ထိုင်နေစဉ်၊သင်ပြောနေတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းတစ်ခုမှာသင်ချစ်သောသူ၊သင်သည်အဘယ်သို့ရှာတွေ့ဖို့ရှိသည်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့မှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများကမ္ဘာအဝှမ်းမှကူညီသောမိတ်ဖက်များအတွက်ချစ်ကြည်ရေး၊စိတ်ကူးယဉ်နှင့်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအထိထောင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတတ်သူတို့အဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရှာတဲ့မိတ်ဆွေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ပင်အနာဂတ်ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းမှဥရောပတိုက်၊အမေရိကတိုက်၊ဩစတြေးလျ၊အာဖရိကသို့မဟုတ်အာရှ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးသတို့သမီးကိုပိုလန်ကနေသို့မဟုတ်အချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့မဟုတ်လျှောက်ထားထံမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ကနေဒါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကမ်းလှမ်း ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်း။ သင်၏မေတ္တာကိုတွေ့လျှင်ပင်၊သူသို့မဟုတ်သူမဘဝအတွက်အခြားအထောင့်။ ဒါဟာကြင်နာ၏။ အခုကကြိုးစားပါ။ မဟုတ်အံ့၊အာရုံစိုက်သလိုအင်တာနက်လျင်မြန်စွာကြီးပြင်းခဲ့သည့်နှစ်၊ဒီအပေါ်ကြီးထွားလာ။ အင်တာနက်ကိုဖြစ်လာတဲ့အစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တီ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်။ ရာစု။ အများကြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအသုံးပြုမှုဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအားလုံးအချိန်ရှာတွေ့ဖို့မိတ်ဆွေတွေ၊အချစ်-အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ဘောကန်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်။ သို့သော်၊လျှင်အရှိအသင်၏အချို့သောအုပ်ထိန်းသူ၏အားနည်းချက်များကို။ အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်၏အအင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဖြစ်လေးစား၊အပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြောင်းသင်ပေးစည်းမျဉ်းများလူတစ်ဦးမှပြောသင်ကြိုက်နှစ်သက်သကဲ့သို့အများကြီး။ သင့်စိတ်ပူစရာရှိသည်မဟုတ်ကြောင်း၏အသွင်အပြင်နေ့စွဲအပေါ်။ နှင့်အသံုးျပဳေျမည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်မည်သည့်အရပ်မှာမဆို၊ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်ကျော်မှန်ကန်အချက်အလက်၊စ သင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရောလူများစွာနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာ၊ထိုသို့အမည်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စိတ်အကြောင်း၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တို့သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်သာဖြစ်သည်။ အပေါင်းရမှတ်များအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊ဒီအပူ။ အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များရှိသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်ကို၊သင်ဘယ်မှာရှာတွေ့လိမ့်မည်အချက်အလက်အကြောင်း၊သူသို့မဟုတ်သူမအတွက်သေချာစေရန်အလို့ငှာဤအမျိုးသမီးများခင်ဗျားတစ်ခုခုရှိသည်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူထိုသူတို့ကို။ ဒါ့အပြင်ဆက်သွယ်ရေးအလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်၊အခမဲ့သီးသန့်ရှင်အဖြစ်လက်ခံအီးမေးလ်စနစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သေချာပါလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာ၊ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအွန်လိုင်း-ကြီးမားတဲ့အနုတ်။ သင်သိဘယ်တော့မှဆိုရင်၊အဖွဲ့ဝင်ပြောရန်ဖြစ်သည်၊သင်၌စိတ်ဝင်စားကြအမှန်တရားကကိုယ့်ကိုယ်ကို၊သို့မဟုတ်လျှင်၊သူသို့မဟုတ်သူမအတွက်ပရိုဖိုင်နှင့်သင်တို့အပေါ်မှာခိုးချ။ အချို့လူများကပြောလောက်အိပ်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်၊မိသားစုကိုအဆင့်အတန်း၊ပစ္စည်းအဆင့်အတန်း၊အန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံး၏ကြားမှအတွက်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွေ့အလွန်ကောင်းဖြစ်နိုင်ခြေသင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊သို့မဟုတ်ပဲ။ အပေါ်သွား၊ကြိုးစား၏၊ကံကြမ္မာကို၏ရှာဖွေရေးအတွက်စွန့်စားစစ်မြေပြင်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏။
သင်သိခဲ့သလား? အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိဓါန္မ်ားလျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြသည်၊အဓိပ္ပါယ်ကခင်ဗျားတို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်စကားလုံးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုဘာသာစကားမှာတူညီသောအချိန်။ သင်သိခဲ့သလား? အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိဓါန္မ်ားလျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြသည်၊အဓိပ္ပါယ်ကခင်ဗျားတို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်စကားလုံးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုဘာသာစကားမှာတူညီသောအချိန်။ ဤစာကြောင်းမှလာကြ၏ပြင်ပအရင်းအမြစ်နှင့်မမွန္ကန္ႏိုင္ေပ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်မူဝါဒ။ သူတို့ထင်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်လုံခြုံမှုအတွက်။ ထိုအခါမူကားသူမသည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားသည်၊အဘယ်သူကိုမှသူရောင်းခဲ့ကြပြီးပါပြီအပေါ်အလမ္း။ ရဲနိုင်ကြဘူးကြောင်းလှုံခွင့်ရှာဖွေသူများ၊အလုပ်ဘာမှမရှိဘူး။ အဆိုပါမိန်းကလေးထွက်ပြေးတိမ်းကြောက်တရားကနေဒေါသနောက်ကျောကိုအီရတ်။ ဒါပေမယ့်ပင်ရှိပါတယ်၊သူမစိုးရိမ်ရေမှတ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ချင်သင့်မိသားစုနှင့်အတူသြစတြေးလျမှအခြေချ။ သူတို့အသတ်ခံရ၊ထောင်၊အလုပ်သမား၊လိင်စော်ရောင်းချ။ ၏ကံကြမ္မာမင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအကြမ်းဖက်ဆုိင္းအစ္စလာမ့်ပြည်နယ်(က)လွတ်လပ်စွာရွေ့လျားသည်ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ အစီရင်ခံစာ၌ -ဘာ့ရြန္းမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်ပြီးဂျာမနီမှာတစ်နှစ်အတွက်၊နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အများ၏ထည့်သွင်းအထူးတမ်းအမျိုးသမီးများ။ အမြန်ဆုံးဖြစ်ဖို့နှစ်အရွယ် ။ များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ဤမိန်းကလေးများ။ သူသည်ဂျာမနီမှ၊ယုံကြည်သည်ကိုယ်တော်တိုင်အတွက်ဖြစ်ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊နှင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံအရေအတွက်ဒါဏ်သားကောင်၏အဆိုးဆုံး:သူမနှင့်အတူတွေ့ဆုံဘူဇ၊သက္ပိုင္၊သူတို့ ၊အရပ်သည်နှင့်အညီသင်တို့၏စကားသည်၊ယခု၊အဖြစ်ခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေသူအတွက်ဂျာမ။ ပေးရ-အဆောင်းပါး:ဘာလင်မြို့-ကိုအခြေခံ၊သူကော်မရှင်င္ငံျခားသားမ်ားအတြက္:ဂ်ာသတိပြုသင့်၊အဖြစ်လူနည်းစုအတွက်၊သူတို့ကြောက်သောယောက်ျားသင်သည်အပေါ်သူလျှို။ သင်အသိအမှတ်ပြုသူ၏မျက်နှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ဒါပေမယ့်ပြောခဲ့ကြောင်းမဖြစ်နိုင်အဖြစ်မလာဖို့ဂျာမ။ ငါတော့ပြောကျွန်တော့်အမေကကျွန်မတစ်ဦးကိုငါမြင်သူတစ်ဦးသည်လူကြည့်အဖြစ်-။ ငါ့မိခင္ပြောပါတယ်:သင်သည်မကြောက်၊သူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိသည်မရှိသည်၊ဒါကြောင့်အ ။ ဒါေပမဲ့များသည် ယင်:"အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအကြီးမြတ်ဆုံးခြိမ်းခြောက်"။ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်၊သူမအနေနဲ့အလုပ်အတွက်အလှပြင်ဆိုင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း။ နောက်နေ့မှာစျေး:လူကိုနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်အများကြီးပိုပြီးတက်ကြွ:သူကျွန်မဆီလာပြီးပြောစေခြင်းငှါငါအမေးအရာတစ်ခုခုသည်နှင့်အညီ၊ထိုမိန်းမငယ်။ ထိုအခါငါကပြောသည်:ကျေးဇူးပြု။ ငါပြီးသားသိသည်။ သူကပြောပါတယ်:သင်သည် ။ ငါကလည်း:အဘယ်သူမျှမ၊ငါရယ်မ သူ။။။။။ ဟုသူကပြောသည်:ဒါပေမဲ့၊သင် ပါဘူ ။ သူမအကြားမှအဖြစ်အပျက်သူမရဲ့လူမှုရေးအလုပ်သမားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအကြီးအကဲ ရဲ။ ေလာေလာဆယ္နံပါတ္ႏွနေတယ်ဆိုရင်ဒီလူ၊တစ်ဖန်ပြန်ကြည့်ရှု၊သင်လိုအပ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့။ သူမသည်သူ့ကိုမြင်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဖန်တီးပုံရိပ်အထန်။ ထိုအခါငါငံ့လတစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲ။ ပြုကြပြီမဟုတ်ဘာမှမမှားကိုပြောပြ။ ဆရာ၊အဘယ်သူခဲ့လှည့်လည်း၊ပြော:အီရတ်သည်သင့်အဘို့သာ။ ဖြစ်ပါသည်၊ထို့နောက်သင်လျှင်မလိုက်မသွားပါနဲ့၊ထို့နောက်သင်သည်ဤအရီ။ အဆိုပါမိန်းကလေးသို့သွားလေ၏။ ထို့အပြင်အတွက်အခြေအနေတွင်၊ဂျာမနီကလေး၏အစ်မှလွတ်နေသည်၊နှင့်၎င်းအတွက်သူတို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်။ လူမှုရေးလုပ်သားဟု ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အနေအထိခြောက်လအတွင်း၌အီရတ်။ အနည်းဆုံးတော့သင်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့သည်၊မဟုတ်ရင်အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အတြက္ဂ်ာမဏီကေ၊အလွန်လျှင်မြန်စွာမရှိတော့ပါပြဿနာတစ်ရပ်။ ပေးရ-ဆောင်းပါးတွင်:သငျသညျဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်တစ်ဦးသစ္စာရှိဖို့ဂျာမနီနိုင်ငံ: လုပ်ကွက်အစ္စလာမ်ဝေသည့်အခါကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူးကြောင်းပြောကျွန်တော့်မောင်နှမနှင့်ကငါ့အဘ၊ငါ့အဘ၊သူငါ့ကိုအလိုလားပြီးမှနောက်ကျောသွားကြဖို့ဂျာမနီက၊အဘယ်မှာဤလူသည်၊ဒါကြောင့်အငယ်သောမိန်းမသားများအတွက်နီးပါးလေးလမှာအီရတ်နှင့်ကျောအောက်တိုဘာလအတွက်ဂျာမနီမှ။ ဒါဟာသင်တို့အဘို့အ:မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ငါဆိုတာမရွိဘူး၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့ဖြစ်ပျက်။ ဒါဟာအစ အလေးအနက်ရန်အရေးချင်မည်သို့ပင်ဒီ၏အပျက်၊ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်အားလုံးအပေါင်းအဘော်ပြုကြသူများကြီးသင်တို့အဘို့နှင့်သင်ပြု။ ပီဓါတ္ပံု မွီအတွက်ဆေးရုံအမွားမ်ားနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနေအတွက်အီရတ်အဘို့မဟုတ် လည်းအန္တရာယ်ကင်း။ ပင်သော်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမအလာနှင့်အတူသူမ၏မိသားစုတွင်နေထိုင်ပြီး၊အီရတ်လည်းကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏မိသားစုအက-လူ၊ေဆာ္အဖြစ်၊မိန်းကလေးတစ်ဦးကပြောသည်။ အဖြစ်သင်တို့အဘို့အကြီးမားတဲ့မိသားစု၊ဒါကြောင့်အခုကင်းလွတ်ခွင့်နေစဉ်၊အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ဝယ်ခဲ့၊ဒါပေမယ့်နေဆဲအတွက်အခြေချနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိချိန်တွင်၊လူအပေါင်းတို့သည်မိန်းကလေးများ။ ကျွန်မသိပ်ကြောက်တယ်။ ကျနော်တို့လိုအပ်ထားခဲ့ဖို့အီရတ်၊ဒါပေမယ့်မဂျာမနီကို။ အဲဒီအစား၊သင်ကြည့်ရှုဖို့သြစတြေးလျ။နှစ်မယ္နှင့်တညီသား။ အများစုမှာလိုမျိုးနှင့်အတူ၊မိသားစုတစျခုလုံးရှိပါတယ်။ အမှုကိစ္စအခုတာဝန်ပေးဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေယင်၊ ဒီတော့ဝေးနှင့်အတူဘယ္လိုေလဒ်:ဒါကြောင့်ဝေးကျနော်တို့ရှိသည်မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှအဖွဲ့အရာမ်ိဳးနှင့်အတူလိုအပ်သည့်လုံခြုံရေး၊အကြားတစ်ဦးသတင်းစာကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေရုံး၏ဆန့်ကျင်ပေးရ။ အမှုမပြီးစီး။ ပိုများ၏ဖြစ်ရပ်အပေါ်အာမိန်းကလေးအတွက် ၏-ပူပန်အပေါ်သောကြာနေ့၊ပေးရသတင္းမ်ား၊အကြှနျုပျတို့သညျမှကျူးလွန်နေကြတယ်အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်။ ကျွန်တော်တို့ရေးသားကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်အောင်၊အထွေထွေအချက်အလက်မူဝါဒစည်းမျဉ်း၊အသစ်တစ်ခုကိုဆးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အပေါ်။ မေလအတွက်အင်အား။ ယခုတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်။ ဒါဟာအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အမျိုးအစားများ၏အချက်အလက်စုဆောင်း၊ငါတို့သည်အဘယ်သို့အသုံးပြုရန်နှင့်ကြောင်းကိုသင်၏အခွင့်နှင့်ပတ်သက်ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ သင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုကပြောသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာအဖြစ်၊သင်ရှိသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပုံဒီအကိုအသုံးပြုဖို့လျှင်သင်ချင်ကြပါဘူးဖို့ကျွန်တော်တို့ကို သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုရှိလိုပါကဒီနေရာကိုနှိပ်ပါသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်။ ရှိပါကမည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်မူဝါဒ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျနော်တို့အစားထိုး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်။ ကျွန်တော်တို့ရေးသားကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်အောင်၊အထွေထွေအချက်အလက်မူဝါဒစည်းမျဉ်းအသစ်ဆးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အပေါ်။ မေလအတွက်အင်အား။ ယခုတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်။ ဒါဟာအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အမျိုးအစားများ၏အချက်အလက်စုဆောင်း၊ငါတို့သည်အဘယ်သို့အသုံးပြုရန်နှင့်ကြောင်းကိုသင်၏အခွင့်နှင့်ပတ်သက်ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ သင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုကပြောသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာအဖြစ်၊သင်ရှိသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီးအကွက်ကိုအောက်ကဒီကိုအသုံးပွုဖို့ပိုပြီး:သင်တို့ကိုမလိုချင်ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကို၊ယခုဒီနေရာကိုနှိပ်ပါသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်။ ရှိပါကမည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်၊အဆက်အသွယ်။ နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်၏အသုံးပြုသူမှပေးရ-ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအကောင့်အသစ်များအတွက်လူမှုရေးကွန်ယက်၊အဆိုပါသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဤ။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ဆောင်ရွက်ဘဲတည်ဆဲဥပဒေများ၏အဖွဲ့ချုပ်နှင့်ဌာနသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အဆိုပါဥပဒေအင္ငံျပြည်ထောင်စုနှင့်အတူသူ၏အပြုအမူ။ အသုံးပြုသူသည်တာဝန်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အခြားဆွေးနွေးသူများ၊စာဖတ်သူများနှင့်လူများတွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာတွေကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ၊။ အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့မှတ်ချက်များအတွက်အခြားဘာသာစကားများနှင့်အတူ၊အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများ၏အကြောင်းအရာကိုရေးသားသည်။ အားလုံးအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အဝက်ဘ်ဆိုက်ပေးရသတင်းတည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်အားဖြင့်အသုံးပြုသူကျန်ရစ်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုငြင်းဆန်၊ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသူများအဖို့လက်လှမ်းအခြမ်းသို့မဟုတ်အတွက် အမှု၏ချိုးဖောက်မှုများကိုမှတ်ချက်များအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအသုံးပြုသူ၊သို့မဟုတ်အမှု၏ထောက်လှမ်းအပေါ်သို့လက္ခဏာထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်၏အသုံးပြုသူ၏အသုံးပြုသူအကောင့်။.
ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်များ၏ဗီဒီယို။ ဗီဒီချိန်းတွေ့သည်အခမဲ့&ယံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့&က်ပ္ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ ဤသည်အများဆုံး။ အကြံဉာဏ်အတွက်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသမီးအပေါ်အမျိုးသားများချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်အတွက်အမျိုးသမီး:ထိပ်တန်းအမှားတွေအောင်င့်နှင့်အတူလူတို့အကြံဉာဏ်သူမပေးသည်မှာမိနစ်စက္ကန့်ဖြစ်ပါသည်။ အကြံပေးချက်များများအတွက်အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးများစတင်ပေါ်ထွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အချို့တို့သည်ပုံမှန်ချိန်းတွေ့&အချို့အဗီဒီယို။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်များ၏ဗီဒီယို။ ဗီဒီချိန်းတွေ့သည်အခမဲ့&ယံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့&က်ပ္ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ ဤသည်အများဆုံး။ အကြံဉာဏ်အတွက်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသမီးအပေါ်အမျိုးသားများချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်အတွက်အမျိုးသမီး:ထိပ်တန်းအမှားတွေအောင်င့်နှင့်အတူလူတို့အကြံဉာဏ်သူမပေးသည်မှာမိနစ်စက္ကန့်ဖြစ်ပါသည်။ အကြံပေးချက်များများအတွက်အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးများစတင်ပေါ်ထွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အချို့တို့သည်ပုံမှန်ချိန်းတွေ့&အချို့အဗီဒီယို။
တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်စိတ်ဝင်စား ။ အခမဲ့အွန်လိုင်း အဆက်အသွယ်။သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။စေခၚ အသုံးပြုသူများ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအတွက်အမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်လူတို့သညျ။ ချက်တင်၊အသက်ရှင်သောဗီဒီယို၊ကမ်။ စာမျက်နှာများ.
တိုင်ပင်ရာဇဝတ်သားကာကွယ်ရေးရှေ့နေ အဇဝတ်သားရှေ့နေလိုအပ်မယ့် ။ ဘဝအကြောင်းဤကဲ့သို့သောဖြစ်လာဖို့အတွက်ရာဇဝတ်မှုနှင့်လူတိုင်းနိုင်ပါတယ်၊နှင့်သူ၏အပြစ်ရှိမှသက်သေပြ။ ဤအဖြစ်ရပ်မှန်အချက်ကိုပေမယ့်၊ကအခြေခံနိယာမများ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအမူအ အပြစ်ကင်းစင်၏။ ထိုကဲ့သို့သောအနီးကောင်းတစ်ခုနိုင်ငံသားမကြာခဏအဆင်သင့်မဟုတ်။ ထွက်ရရန်ဘယ်လိုပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုအနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ၊၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂုဏ်သတင်း
အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်ဆောင်တစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်သို့မဟုတ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်လာတယ်နှင့်အတူအလားအလာ၊သင်ချငြိမ်။ ထိတ်လန့်ကလက်ထောက်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊သင်စဉ်းစားရန်ရှိသည်ကမျဉ်း၏ကာကွယ်ရေးနှင့်အပြစ်တင်သင်။ ဒါဟာသင့်လျော်သောအခြေအနေမှာဆက်သွယ်ဖို့ရှေ့နေတစ်ဦး။ နိုင်ငံသားတိုင်းရှိပါတယ်ပာတဲ့အချိန်မှာအရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီ။ နိုင်မှပေးတက်ယူပြီး၊အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏သူတို့ကိုယ်သူတို့၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်တော်မူသော။ သင်တို့ရှာဇဝတ်သားရှေ့နေကြီးဖို့အခွင့်အရေးကိုခုခံကာကွယ်သူတို့ရဲ့အမှု၌။ အပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး၊ထိုလျှင်ရှေ့နေထွက်သွားလိမ့်မည်နေစဉ်အတွင်း ၊နှင့်အချိန်တွင်အမျိုးသမီးများကိုအချိန် ။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်အတွက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိသင်၏အခွင့်လိမ့်မည်ချိုးဖောက်။.
မကြာသေးမီက၊ကျနော်တို့တော်တော်များများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအစည်းအဝေးအတွက်။ ဤစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပေါ်ကြောင်းများအပြားတွင်အရေးယဉ်ကျေးမှုအချက်များကိုဆက်သွယ်၊ဒါကြောင့်ကျွန်မအကြောင်းပြောဆိုဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့။ အဲဒါကိုဘုံဖြစ်ပါသည်ကြားလူပြောသောယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုများမှာတာထက်မအဖြစ်အများကြီးအဖြစ်သူတို့အသုံးပြုကြသည်၊နှင့်ပေမယ့်အချို့အယုံကြည်ဖို့အကြောင်းယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုမဖြစ်သင့်ကြောင်းလှောင်ပြောင်သောကြောင့်၊သူတို့ကျိန်းသေ။ တစ်ခုမှာအရေးကြီးကိစ္စမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်အမျိုးသမီး၊အများကြီးပိုအလေးပေးထားအပေါ်အစောပိုင်း။ ဒီလိုမ်ိဳးလျော့နည်းတည်ငြိမ်ကြိမ်၊အခါ၊ထောင်ရေးရည်ရွယ်အများကြီးလိုအပ်သည့်လုံခြုံရေး၊သို့သော်သင်တန်း၏ဤအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့အသက်သက်သာတရုတ်ဖြစ်စဉ်:အမေရိကန်အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်သည်တွေမရောက်မီလူ၊ဒါပေမယ့်အပြန်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ထက်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများ။ တရုတ်နိုင်ငံအတော်လေးအသစ်များ၏အားလုံးဒီနေ့ရဲ့ -မာန္အင်တာနက်(နေတုန်းပဲအလုပ်လုပ်၊ထိုသို့နောက်ဆုံးသော၊အမှန်)ရာတိုင်းပြည်အတွက်၊နှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုကျော်၊နှစ်အကြာတွင်၊အဟောင်းအလေ့အခက်သေဆုံး။ စဉ်းစားရန်မေးခွန်း၏အဆက်အခန်းကဏ္ဍဒီမှာပါ:လှပသောအမျိုးသမီးသည်အဘယ်သူသည်ပြီးသားဖျစ်ညှစ်ဘဲ၊မိဘအဖိုးအဖွား၊အတတ်ဤအပေါ်ဖိအားလက်ထပ်ရန်သော်လည်းသင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြုစေခြင်းငှါခံစားရဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စား။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင့်ရဲ့အဖိုးအဖွားများ၊နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်(ပေါ်မူတည်ပြီးသင်၌ရှိကြ၏ရှိရာတရုတ်)ဆဲတန်ဖိုးမိသားစုတည်ငြိမ်၊အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့အချိန်ပေး၊တည်ငြိမ်မှုနှင့်မတည်ငြိမ်မှု၏အချိန်။ တကယ်တော့၊တစ်ချိန်ကအရက်စွဲသူတစ်ဦးကမိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းအရပ်တွင်သူမ၏မိဘများနှင့်အဖွားပြီးသားအတည်ပြု၏ကြောင့်၊သင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါကြောင်းအဘယ်သူမျှမအဲဒီအရပ်တွေဟာအလွန်ရယ်စရာ။ သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးမျိုးဆက်ကောင်းမှာဘဲ ပထမဦးဆုံးတစျရှိသည်ဖို့ချစ်လွတ်လပ်ခွင့်၏ရွေးချယ်မှု၊အကြောင်းတစ်ခုခုတွင်စိတျထဲမှာထားသငျ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဆက်ဆံရေးများအတွက်-ဒါကြောင့်ကိုယ့်မတန်၏ယဉ်ကျေးမှုထုံးများအကြောင်းသင်ပြန်လဲကြ။ သတိရ:အခါသင်စဉ်းစားနေပါတယ်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆက်ဆံရေးကို၊မကျင့်သုံးသင့်မိဘများ၏၊လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့် သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်။ သင့်ရဲ့မိဘများနှင့်အခြားမိသားစုဝင်တွေအတွက်အဆင်ပြေအစားအချစ်ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်၊မဟုတ်အများကြီးကိုကူညီရှာဖွေတစ်ဦးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်အမှန်တကယ်ထိတွေ့။ တူညီသောမိန်းကလေးအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့-သမီးကြီးများကစီစဉ်သင့်အဖေရဲ့တပ်စခန်းအရာရှိ၊ကြည်းတပ်တွင်အပြီးမေးသင်အနေဖြင့်အချိန်၊သင်အမှန်တကယ်နားထောင်သင့်တယ်ထင်ချိန်းတွေ့ဖို့အကြံဥာဏ်ကြသူလူများထံမှလည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး? ဒီမကြာခဏဦးဆောင်ဖို့အခက်အခဲပါဝင်သောမိဘများအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ သင်ရှိစေခြင်းငှါအကြောင်းဖတ်ထိတ်လန့်မင်္ဂလာဆောင်စျေးကွက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်၊ဘယ်မှာမိဘများတင်ထားတဲ့စားပွဲ ကျောက်ပြား၊ကြော်ငြာသူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးသားနှင့်သမီးတို့မှအလားအလာမိတ်ဖက်။ ပေမယ့်တကယ်တော့အများစုသည်တရုတ်မသိကြပါမိမိတို့အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဒီတော့ကောင်းပြီ၊အိမ်ထောင်စျေးကွက်နေဆဲအတော်လေးဘုံ၊ပင်အနောက်မြို့ကဲ့သို့ရှန်ဟိုင်း။ စဉ်အတွက်ကြိုးစားနိုင်ပါဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့အေးမြနှင့်မတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပါတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ၊အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသည်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုပေးပို့ဖို့၊စာသားမက်ဆေ့သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်လျှင်ပင်၊ထိုဆက်ဆံရေးအမပင်အဝေးမှအလေးအနက်။ ဒီအထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုကွာခြားချက်အတွက်၊ငါ့အတွေ့အကြုံ၊အကြီးမားတဲ့အကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပျက်ကွက်။ ကျွန်တော်သိသောမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုကျွန်မတွေ့ဟုတ္ရပါခင္ဗ်ာငါးဆမီနေ့လယ်စာနက်ဖြန်နေ့-မနက်ကျွန်တော့်အတွက်၊ဒါပေမယ့်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ယောက်ျားများသောအားဖြင့်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှိသမျှကိုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်တရုတ်ပိုးပန်း၊နှင့်အချို့သောမိန်းကလေးများဤယူရန်အလွန်အလေးအနက်။ ကျွန်တော်တခါတောင်းတဲ့မိန်းကလေးကသူဘာလုပ်ချင်နေ့စွဲအပေါ်နှင့်ဘယ်တော့မှမ။ လည်းလက်ခံ ဆောင်ခဲ့တစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအပေါ်နှစ်ဆနေ့စွဲ-အပိုအလိုအစောင့်အကြပ်တစ်ဦး ၊သို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပိုက်ကွန်ကို။ မဆိုအမှု၌၊အားလုံးဒီအတွက်တရုတ်၊ပင်လျှင်သင်ချိန်းတွေ့တစ်စုံတစ်ဦးကအစစ်အမှန်၊အမင်္ဂလာဆောင်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်ပါသည်အပေါ်။ မင့်လျှင်ပင်အရေးကိုသူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊သူနေဆဲအရာတစ်ခုခုအပေါ်သူမ၏၊စိတ်ကိုသူမ၏မိဘများသာမြှင့်တင်ရန်ခပ်သိမ်းသောအချိန်သူမမြင်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊အကြို-ထောင်ရင်းနှီးအများကြီးအလွန်ရှားပါးတဲ့အတွက်တရုတ်ထက်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသော်လည်း၊မအများကြီးနှင့်အတူအငယ်၊မြို့ပြတရုတ်။ အမှန်မှာ၊သို့သော်၊အကြောင်းအဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဖက်၌ရင်းနှီးမှု၊ခိုင်မာသောယူဆလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာတစ်ခါတစ်ရံရန်အတွက်တရုတ်တို့ချိန်းတွေ့အဘယ်သူင္ငံျခားသားမ်ားဤသည်အမြဲတမ်းအမှုမ။ အမျိုးသားများအဘို့၊အမှုအလေ့အဖြစ်လျော့နည်းတင်းကျပ်မဟုတ်ပါဘူးအသည်းအသန်ကြိုဆို၏အိမ်ထောင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ(ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများမကြာခဏမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ရပ်"၏ကျန်အမျိုးသမီး"၊မိသားစုဖိအားအဖြစ်လေ့ရှိတယ်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူထက်သူတို့အဘို့အ အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ အခြားသောစကားအတွက်၊အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းဖိ။ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့အခွန်လိုအပ်ချက်များကိုသောယောက်ျားမကြာခဏတွေ့ဆုံရန်ရှိသည်ကိုအများအရည်အချင်းပြည့်မှီအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအဖော်တစ်ဦးနေအိမ်တစ်လုံး၊ကားတစ်စီး၊နှင့်အမြဲတမ်းအလုပ်ကြသည်ွချိန်းတွေ့ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုများအပြား၌စက်ဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကျားမအချိုးမညီမျှအများအပြားသန်းအပိုဆောင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးမကြာခဏတတ်နိုင်ရန်လည်းဇီဇာ။ ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်အဘယ်သူသည်၊သူမချိန်းတွေ့တရုတ်လေး၊ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြောင်းသူမကဘဲအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်ခဲ့တဲ့ကား။ သူမ၏နေ့စွဲစာသားအတိုင်းမယုံကြည်နိုင်ဘူးသူမ၏ကံကောင်းခြင်းသည်ချက်ခြင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးသတ်မှတ်အချိန်များအတွက်အခြားနေ့စွဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အလေးပေးနှင့်အစောပိုင်းထောင်ရေး၊အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးသည်၊ဆိုလိုသည်ချိန်းတွေ့အများကြီးပိုအဓိပ္ပာယ်နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သိမ်းယူမဖြစ်သင့်။ အခုသင်သိသောအကြောင်းနည်းနည်းချိန်းတွေ့ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊အဘယ်အရာကိုမြင်တရုတ်ပြောကြောင်း၎င်းတို့၏စံပြမျိုးချစ်။ ဤလက္ရွ္မ်ားႏွတရုတ်သင်ခန်းစာတစ်ခုလတ်အတန်းနှင့်အတူအင်တာဗျူးနှင့်အတူလမ်းများပေါ်တွင်လူတရုတ်နိုင်ငံ၏။ ဤပြီးနောက်တိုတိုအင်တာဗျူးများ၊ဘုန္းဘုန္းအဓိကဘာသာစကားတွေ့ရှိချက်များအတွက်အဖြေ။ မိုက်ကယ် ကုန်ခြောက်နှစ်အတွက်ရှန်ဟိုင်းလုပ်နေမှုအရာအနည်းငယ်သာအကူအညီတံတားကြီးကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားကိုအကြားကွာဟချက်ကိုတရုတ်နှင့်အနောက်နိုင်ငံများ။ နောက်ကျောအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလေ့လာဖို့စီးပွားရေး၊တရုတ်မိုက်ကယ်တော်ရက်ဂေးဂီတ၊သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဘတ်စကက်ဘောအသင်း၊အကူအညီတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊တစ်ဆုပ်စာ၏တက်တူးသူနှစ်သက်မဟုတ်ကိုရှင်းပြပါ။ ဝင်လေနံပါတ်များပြီးနောက်အသီးအသီး သံ၊နှင့်ထိုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းခလုတ်ကိုမှသူတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့လေသံပြောင်းတံဆိပ်။
အဖြစ်အသဲအနည္းပရောစာအုပ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်အဗျာကချင်သူယောက်ျားတိုးမြှင့်ဖို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းအိပ်မက်အမျိုးသမီး၊အတော်လေးမှန်ကန်စွာ၊စဉ်အမြဲအဆိုအရမည်သို့သောမေးခွန်းများ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်တော့မှမမေးပါနှင့်အတူတူပင်ပြင်းထန်မှုအပြီးဘယ်မှာ။ (ဎ)သို့သော်ယင်းကိစ္စအတွက်၊ဒါဟာအခွင့်အလမ်းတိုးမြှင့်ဖို့ ထိရောက်မှုပြောစေခြင်း၊"ဘယ်မှာ"-ေမးခြန္း၊အဆိုအရပ်၏နေအိမ်သို့အမျိုးသမီးများ၏အနည်းဆုံးဖြစ်ရေး။ ဒီလိုမေးခွန်းအဖြစ်ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အလှဆုံးအမျိုးသမီး၊အဘယ်မှာငါရှာ၏အများစုဟာအမျိုးသမီး။ သို့မဟုတ်ငါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးသင်ယူဖို့၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံး။ သင့်အမြဲတမ်းထားရှိရဲ့အစမှာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လည်းမရှိသည့်နေရာများအတွက်အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီး၊အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးများ၊သို့မဟုတ်။ သင်ဆဲအကောင်းရော၊ကျွမ်းကျင်သူ၊သင်ထိုင်နေကြတယ်ဒါပေမယ့်အမြဲသာသာတိုက်ခန်းများအတွက်ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အမျိုးသားများရဲ့အစည်းအဝေး ၊ထို့နောက်အကောင်းဆုံးအရောအနုပညာတို့သည်ညှိုးနွမ်းလိမ့်မည်ဟုအပေါ်စပျစ်နွယ်။ ဒါဟာပိုဆိုးလျှင်၊ရလဒ်အဖြစ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအခြေအနေတည်ရှိမျှအဆက်အသွယ်အမျိုးသမီးတွေကို(ဥပမာ၊ကြန္ၿရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခြားနေရာများ၏ပုံမှန်"အမ်ိဳးသားအလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား")။ သင်ရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့၊(ဎ)အစသွားခဲ့တဲ့နေရာအများစုအမျိုးသမီး။ ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိရာတပ်အစဉ်အများအပြားအမျိုးသမီး၊အ အခွင့်အလမ်းမှာအကြီးဆုံးနောက်ဆုံး၊အိပ်မက်အမျိုးသမီးတွေ့ရှိခံရဖို့။ ဘယ်ယောက်ျားနှင့်တွေ့ဆုံလှပသောအမျိုးသမီးအထောက်အကူစာဖတ်သူကိုဤအရပ်ကိုရှာဖွေဖို့၊နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အငျ့-ပျော်ရွှင်မှုအတွက်နှင့်အတူအိပ်မက်မက်အမျိုးသမီး။
အမျိုးသမီးပုံစံကိုတရုတ်ယောက်ျားလေးလို အရက်စွဲခဲ့ဖျော့(ဤရှုပ်ထွေး၊အဘယ်သူသည်သိတော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကသူတို့အကြောင်းပြောနေတာလူမျိုးရေးအခါ၊တကယ်တော့သူတို့ဆိုလိုသည်မှာစာသားကိုအရောင်နဲ့အသားအရေ၏သန့်ရှင်းစင်)နှင့်လှပသော)။ ကျွန်တော်ထင်တာကလူအပေါင်းတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာနှစ်သက်သည်။ အချို့ကြွယ်ဝသောတရုတ်ယောက်ျားလေးစေခြင်းငှါလျော့နည်းဂရုစိုက်ပိုက်ဆံအကြောင်း၊ဒါပေမယ့်သူတို့ဖြစ်မည်အကြောင်းသင်ယူစိတ်ဝင်စားသူတို့သားသမီးရဲ့ ။ ချမ်းသာတဲ့လူတွေရှုပ်ထွေးသောလူအကြောင်းအရာများစွာကိုအတူတကွ။ တစ်ချက်လောက်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ကြွယ်ဝသောတရုတ်:မိမိတို့ဥစ္စာစည်းစိမ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့တရုတ်ဇနီး၊မိသားစု၊စီးပွားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအရင်းအမြစ်များ၊သို့မဟုတ်၊ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်အတွက်၊သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နှင့်ရူပါရုံကို။ ဤသည်အသက်အရွယ်၊အချိန်အခါအခဲဖြစ်လာစူပါ-ကြွယ်ဝသောများ၏ထောက်ခံမှုမရှိဘဲတစ်ဦးတိုးချဲ့မိသားစု၊အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာ၊ဘယ်မှာလူမှုရေးသင်တန်းတွေဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီးတည်ငြိမ်။ ပင်ကာလ၌ပရမ်းပတာအတွက်တရုတ်၊ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်၏ေသာ့ခ်က္ေသာေဟာင္ေကာင္၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သောသူမနှင့်အတူစတင်၊ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ရဲ့ အမျိုးသမီးများမှာကိုမရောက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ (အရာအားလုံးပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့အတွက်ဒုတိယနဲ့တတိယမျိုးဆက်။) ကောင်းစွာ၊အများအတွက်စေ့စပ်သောသူတို့၏ဖြစ်ကြောင်းလျံမဟုတ်ဘူးထင်တယ်၊သူတို့လိုလက်ထပ်ဖို့အဖြူသောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးအရမ်းလွတ်လပ်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောခံရဖို့မိသားစု။ ဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားသောင့်လာတဲ့အခါကျွန်တော်အတွက်။ ့ရှိရာအဆိုပါတရုတ်တစ်ဦးတော်တော်လေးရွေးချယ်မှုကန့်သတ်၊အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ငါသတိရကာင္ ၊သီချင်းမေ-လိန်းရဲ့လက်၊သူလက်ထပ်ဖို့တစ်ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်အခါသူအတွက်ဟူစတန်နှင့်အတူသူ၏ရေနံကုမ္ပဏီ။ သို့သော်ဤထောင်ကွာရှင်းအတွက်အဆုံးသတ်။ ဒါကြောင့်သိသာသောဤမိန်းမသည်ကိုယ့်အဖလားမယား။ ဘယ်လိုပေါ်မူတည်စကားလုံးများ၊စမတ်ဖုန်းများ၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ကြွယ်ဝသူဖြစ်သည်။ သင်သည်မပြုလျှင်ပူဇော်အခြားအရာတစ်ခုခုစေနိုငျတယျထက်ပြုသောအားဖြင့်တန်ဆာ၊အများဆုံးစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်။ သူအောင်မြင်ရန်နှင့်ဖြစ်ကောင်းအချက်ပြုတ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့အသုံးပြု၊အရာနီးပါးမှုကိုလျော့နည်းစေရန်သူ့ကိုတစ်ခုတည်းပုံ။ လျှင်၊သင်တန်း၊ရောက်သောအယူမှအဘို့စမ်းသပ်ဖို့နိုင်စွမ်းအမိ၊ထိုအခါဂျပန်ရှင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရမယ် စွမ်းရည်လိုအပ်။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သင်သာမျှော်လင့်ချက်များဖြည့်ဆည်း၊သင်ရှိစေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်း။ သို့မဟုတ်ပဲအခြားသတို့သမီးကဘယ်သူဘယ်လိုသိရပါဘူးချက်ပြုတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှုကိစ္စအတွက်၊သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေး၊ျပံဳးလွ်က္။။။။။ ငါဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူမယ်လို့အဖြစ်သူမ၏တစ်မယားသို့မဟုတ်သကြား၊ဒါပေမယ့်သမီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြဘူးများအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောလူမှုရေးအကြောင်းပြချက်သူတို့လက်ထပ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်မှာအနောက်ကမ္ဘာ၊ထို့နောက်သူမလိုဖြစ်နိုင်လက်ထပ်တစ်ဦးအဖြူအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်။ ဘယ်မှာတရုတ်အလုပ်လုပ်၊အဘယ်မှာရှိတရုတ်လက်ထပ်ပါ။ ဤသည်တရုတ်ယုတ္တိ။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်လက်ထပ်ဒေသခံမိန်းကလေးများ၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့အရောင်။ ကောင်းစွာ၊ငါပြောနိုင်ကြွယ်ဝသောတရုတ်လူမငြင်းပယ်ကော့ကေးမိန်းကလေးငယ်များ၊ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်မေးမြန်းလျှင်သူတို့လိုချင်တဲ့ကြောင့်၊ငါအပေါ်သံသယ။ အများဆုံးများအတွက်ငွေရတတ်သောသူကလူ၊သူတို့ကတူညအချိန်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုအနောက်တိုင်း။ ဒါပေမယ့်တကယ်နေရတဲ့အကြောင်းပြောနေတာ။ ငါမှာမဟုတ်ဘူးထင်ကြ၏။ ပင်လျှင်ငါလုပ်ခဲ့တဲ့။ သူတို့၏မိဘများမှာမဟုတ်ဘူး၊လက်ခံခဲ့ကြပြီသူတို့ကို ဒီ။ အထူးသဖြင့်အများစုအတွက်အလွန်ကြွယ်ဝသောမိသားစုများ၊မိဘများ၏ကြွယ်ဝသောမိသားစုများဆုံးဖြတ်တွေအများကြီး။ ကောင်းစွာ။ ကဲ့သို့အဝါရောင်အဖျားတက်၊အဖြူလှိုင်းသည်ဒါကြောင့်အများအပြားအားကြီးသောတရုတ်ဖြူအမျိုးသမီးများအတွက်အကြောင်းပြချက်၏သာလွန်၊ရှားပါး၊ထူးခြားတဲ့ ၊သို့မဟုတ်ရိုးရိုး။ ချိန်းတွေ့တစ်ဦးအဖြူအမျိုးသမီးအမြင့်၏စာရင်းအပေါ်တရုတ်ရေးရာ၊ဒါပေမဲ့စာရင်းအပေါ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏။ တရုတ်အသိသောထောင်နှင့်အတူအဖြူအမျိုးသမီးသည်စံပြမဟုတ်။
အိမ်ခြံမြေအကြံဉာဏ်။ သင်ရရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဦးအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်(လက္ေ၊ရောင်းချ၊ပေါင်နှံ၊ရှယ်ယာပါဝင်မှုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်)သို့မဟုတ်သင်ရှိသည်ဆိုအငြင်းပွားမှုအတွက်ဤဧရိယာ၏(ဥပမာ၊၊အငြင်းပွားနှင့်အတူအဆောက်၊အိမ်နီးချင်းကနေကွေ့နှင့်အခြားအိမ္ရာအငြင်း). သို့မဟုတ်သင်အလို အတုိက္ခန္း. ထို့နောက်ထွက်ရှာတွေ့အဘယ်သို့သောအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အိမ်ခြံမြေအပေါ်အရေးပါပါတယ်သင်ကူညီနိုင်နှင့်ဤခက်ခဲသောမေးခွန်းများကို။ အကြောင်းရင်းကိုရှာခြင်းငှါဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အိမ်ခြံမြေအပေါ် ၁။ လုံခြုံရေးအတွက်အရောင်းအဝယ် သင်ကြားရန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုအချို့သောအချိန်ပြီးနောက်ဝယ်ယူ၏အိမ္ရာ၊ကြေငြာအမွေသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ရန္သူအကြောင်းဘာမှမသိနှင့်ခိုင်၏သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု။ ပင်အခါစစ္ေဥပဒေကြောင်းအရ"ဘ"အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ဘဏ်အားဖြင့်(ဥပမာ၊ပေါင်)၊အာမခံချက်မရှိဖြစ်၏လုံခြုံရေးအရောင်းအဝယ်၊ဘဏ်ဂရုခန့်သာသူတို့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွား။ မှုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများဝယ်ယူခံေျမ လက္ခံဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အိမ်ခြံမြေအပေါ်အနေဖြင့်ရှေ့နေများ၏ဝန်ဆောင်မှု။ သဘောတူအပေါ်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုများအရောင်းအဝယ်နှင့်အတူပြင်ဆင်မှု၏မှတ်ပုံတင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်းသမိုင်း၏အတိုက်ခန်းသို့မဟုတ်အိမ်မှာ၊စသည်တို့ကို။ ၂။ အကူအညီအတွက်အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်း၊အိမ်ခြံမြေ လျှင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပဋိပက္ခအခြေအနေအတွက်လေးစားမှုအတွက်(ဥပမာအားဖြင့်၊အခြားပိုင်ရှင်၊ကျောင်း၊ဥယျာဉ်၊စသည်တို့ကို။)၊ သင်ရနိုင်အခမဲ့အပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ်ခြံမြေနှင့်ကျွမ်းကျင်သူထံမှအကူအညီကျွန်ုပ်တို့၏သူတစ်ဦးရှေ့နေပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်သင်၏မေးခွန်းနှင့်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြုမူ၊အဘယ်သို့ပြုရမည်ရန်လိုအပ်သည်အခြေချရန်ငြင်း။ ၃။ အကူအညီသာရယူလျော်ကြေးငွေကြေးဆိုင်ကွေ့အခန္းမ်ား ျအိမ္ရာ ဒါဟာမကြာခဏအမှုအတွက်တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံမပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါအရာအဖြစ်အပြစ်၏အအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်နယ်ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား(ဥပမာအားဖြင့်၊ကြောင့်အယွင်းခေါင်မိုး၏)။ နှင့်တိုင်ပင်ရန်ကိစ္စရပ်များအပေါ်များ၏လျော်ကြေး၊ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်ကိုရှာအိမ်ခြံမြေရှေ့နေများ၏ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွမ်းကျင်သူများကသင်ပြောပြလိမ့်မယ်ဘယ်မှာသွားကြဖို့၊အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများစုဆောင်းရန်သက်သေပြရန်အချက်ကို၏အဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ငွေပမာဏပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ ၄။ အဆိုပါဖြေရှင်းချက်ပြဿနာတွေအတွက်ရှယ်ယာပါဝင်မှုအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အငြင်းအတူအုပ္ဆုိင္ အဆိုပါဝယ်ယူအသစ်(သေးသေးအိမ္ျ)မဖြစ်စေခြင်းငှါလျော့နည်းအန္တရာယ်ပြောင်းရွှေ့ထက်ဝယ်ယူမှု၏ဒုတိယအိမ်။ သွားနေတယ်ဆိုရင်ဝင်ဘာတူစာခ်ဳပ္ျမႇဳပ္ႏ၊င-ကေအဲန်ဂျီအ၊ရှေ့နေကစစ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်စာချုပ်အတွက်နှင့်အတူလိုက်နာ။ ဆိုရင်အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်၏နိဂုံးပိုင်းပြီးနောက်စာချုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုေဆာင္ရြက္မဥပဒေကြောင်းအရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု၏အခြေအနေကိုအကြံပြုချက်များပေးဖြေရှင်းရန်ပဋိပကၡ။ ၅။ အကူအညီအတွက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှု၏စာရွက်စာတမ်းများကိုမှတ်ပုံတင်များအတွက်အပေါင်ခံ၊ေတာ္ဝင္ေ လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်လျှောက်ထားရန်တစ်ဦးအပေါင်ခံ၊ အမ်ားျပည္သူအိမ္ရာ၊ကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လိုအပ်စုဆောင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်၏။ အထူးေသင်၊အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကိုရှာခြင်းငှါဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အိမ်ခြံမြေအခမဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ။ အထူးကုလိမ့်မည်သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေနှင့်စာရွက်ပေးရန်လိုအပ်သည့်အကြံပြုချက်များ။ သကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ပိုင်ရှင်၊အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အိမ်ခြံမြေအပေါ်ကိစ္စများအခွင့်အလမ်း ဖို့ကြိုတင်သတိပေးကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်နိုင်အန္တရာယ်အနာဂတ်မှာ။ အချိန်ကိုကယ်တင်အတွက်စုဆောင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်း။ အခြေချအငြင်းပွားနှင့်အတူအများဆုံးအဆင်သင့်။ အောင်တောင်းဆိုရန်လက်ခံရရှိရန်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအိမ်ခြံမြေအပေါ်အရဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူအကြံဉာဏ်ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်လုံးဝအခမဲ့.
ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန် အမှုဆောင်ထုံးစံအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဥပဒေဖြင့်(ကုတ်၏ဇဝတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ)အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှု၏ထောက်လှမ်းခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို၏အပြစ်။ အထက်လွှတ်တော်ကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအခြေချသည်တရားရုံးကအဆိုအရအဆိုပါပစ္စည်းများ၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ အကြို-ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည်နှင့်အတူအဆင့်စတင်အပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆို။ အဆိုအရအဆိုပါဆောင်းပါးတွင်၊အဆိုပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်စတင်အပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုထားပါသည်: အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပြစ်; ဆန္ဒအလျောက်လက်နက်ချရန်; အစာအပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်နေပစ္မႈ၊လက်ခံရရှိ၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များ။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အစိုးရရှေ့နေများအတွက်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများမှခန္ဓာကိုယ်၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု၏မေးခွန်းအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆို။ အတွက်အခြေခံများပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှု၏အထံတော်လုံလောက်သောဒေတာညွှန်ပြနိမိတ်လက္ခဏာများအပစ္မႈ။ နှင့်အညီပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အစွပ်နှင့်သူ၏နောက်ခံလူအမှန်ကိုဆန်းစစ်ပစ္စည်းများ၏အပြစ်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်ကို။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျှပြဋ္ဌာန်း ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်လေးစားမှုအရာများကိုဥပဒေနဲ့အကျွမ်းနှင့်အတူအမှုဖြစ်။ အထိန်းကာလသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်းရကြလိမ့်မည်ပြေး၏နေ့စွဲကနေအရင်ခံယူသည်၊သို့မဟုတ်အင္ခြသို့ဥပဒေကြောင်းအရအင်အားအရင်အ ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အ(ဏာ)တြင္အဆံုးသတ္သြား၏။
နေစဉ်သင်သည်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအခန်းအတွက်၊ဆဲလ်ဖုန်းပိတ်ထားနှင့်အသင်ဆဲတူလုပ်ကိုင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကမ်ပြောပြသို့မဟုတ်စာသားရန်အတွက်စကားပြောခန်း။ ချက်တင်။ လော့ဂ်ချက်တင်ႏသင့်ရဲ့ဖုန်းမလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးသင်ယူခံရဖို့အမည်မသိနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းသည်ဆိုက်နှင့်အတူပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ချက်တင်။ လုံးဝ အမည်မသိ၊သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်မမြင်သူ။။။။။ ချက်တင်နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ။ ချက်တင်။ ဝန်ဆောင်မှုသင်စာသားအဆိုပါမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်အတူကျပန်းရွေးချယ်ထားသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှပုဂ္ဂလိကအတွက်အခန်းပေါင်း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ၊သင်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသင်၏အချိန်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပုံစံများ၊ရိုးရှင်းစွာရိုက်ထည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်ကိုတစ်ဦးလူစိမ်း။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်နိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးဝန်ဆောင်မှု။ ချက်တင်။ အရှက်အများပြည်သူအတွက်ဗီဒီယို၊စာသားစကားပြောခန်းပြောပြရန်အဦးခေါင်းကိုဦးခေါင်း၊ကျနော်တို့လည်းရွေးချယ်သုံးနေရာ၊နေရာပိုထက်နှစ်အသုံးပြုသူများကပြောပြရန်အတူတကွ၊လူတွေ့ဆုံရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဆို။ သင်အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်လျှင်ပင်ဖြစ်နိုင်သမျှသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ချက်တင်။ သုံးစွဲဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအများဆုံးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ဆိုင္တယ္။ အဆိုပါအားသာချက်များများ။ ဤမျှလောက်များစွာသောတူ-မိတ်ဆွေစာရင်း နေထိုင်အတူချိတ်ဆက်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ခန့်ထားပြီဆိုတာကိုစဉ်အတွင်းစကားပြောသည်။ ချက်တင်။ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချက်:ကျနော်တို့အလုပ်ကြိုးစားစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းပေါင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြရန်နှင့်စစ်မှန်သောလူ။ ချက်တင်။ အောင်မြင်ပြီးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ ။ အများပြည်သူစကားပြောအများပြည်သူမှအခန်းပေါင်းများမှာလည်းအခမဲ့ပူးပေါင်းဖို့၊သင်ပါဘူးအကောင့်တစ်ခုလိုအပ်။ အသီးအသီး၏အခန်းပေါင်းစကားပြော။ စာမျက်နှာတစ်ခုရှိပါတယ်တိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်:ချိန်းတွေ့၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ချစ်ကြည်ရင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီရန်။ စာမျက်နှာဟာအလွန်ကြီးစွာသောရှိရာဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူလူများအသီးအသီးအခြားအကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာပြောဖို့သူစိမ်းအတွက်ကျပန်းပုဂ္ဂလိကအခန်းအမည်မသိစကားပြောခန်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာထောက်ပံ့အခမဲ့။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ သူတို့ပြောမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအမည်ဝှက်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံ။ ကွဲပြားခြားနားသည်ကြောင့်ငါတို့သည်အားလုံးအကောင်းဆုံးချက်တင်အခန်းပေါင်း၊၊အခန်းအများပြည်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကများ၊ဗီဒီယို၊စာသား၊ဓာတ်ပုံစတူချက်တင်အခန်းပေါင်းလိုအပ်ခဲ့လျှင်။ အဆင့်မြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုခေတ်မှီပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံကြည့်ရှုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ချက်တင်။ နှင့် အရပ်နှင့်အတူလူသစ် ကနေတဆင့်ကမ်နှင့်မိုက်ခရိုတူအပြန်အလှန်။ ချက်တင်။ အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်အချို့သို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုး၏ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်ကျော်၊ပဲစာသားမက်ဆေ့မှပေးပို့သူမှလက်ခံ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အချိန်အတွက်လွယ်ကူခဲ့ဖူးခဲ့သည်။ လှောနိုင်တယ်။ တစ်ဦးတစ်၊ပရောအွန်လိုင်းမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများသို့မဟုတ်တဲ့သူကလူတွေ့ဆုံရန်ချင်။ ရက်စွဲထက်မြက်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်အတူ။ ဤသူအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းဝန်မှအမြန်ဆုံး။ အမည်မသိအခမဲ့စကားပြောစနစ်:သင်ရုံရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်၊စစ်ဆေးရန်အခန်းကဒီမှာ။ အဘယ်သူမျှမတာဝန်များအတွက်မှတ်ပုံတင်။ သင်ခံစားနိုင်ပွင့်လင်းသောနေရာအားလုံးအပေါ်ဧည့်-ချက်တင်-ကူျ။ လှန်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းများ:ကျွန်တော်တစ်ဦးကျိုးနွံငွေပမာဏ၏စစ်မှန်သောအသုံးပြုသူများဒီမှာဝင်ရောက်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ စကားပြောသည်၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးပေါ်တယ်၊ဒါပေမယ့်နေဆဲဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အတူ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောမိုဘိုင်းချက်တင်မွတ္ထားယူသွားအားလုံးရှုပ်ထွေးထွေး။ နှာက်-အခမဲ့-တုံ့ပြန်မှုလူ စကားပြော:မတူဘဲအခြားမိုဘိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံလျောက်ပြရန်၊ကြော်ငြာနှင့်အခြားကမကောင်းဘူး-ပစၥည္းမ်ား-ဆက်လက်ပို့စ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအခမဲ့နှောက်ယှက်။ ခံစားတိပညာ၊လူသားဆန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှု။ သုညအလွဲသုံးမှု-တာဝန်ရှိ၊လျောက်ပတ်သောအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း:သင်တွေ့လိမ့်မည်ဖော်ရွေလူများဝင်ရောက်ဖို့ချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ဤစကားပြောတယ်အမှုအလွဲသုံးမှု၊လူမျိုးရေးနှင့်မည်သည့်အမုန်းစကားပြော။ သင်ခံစားနိုင်လျောက်ပတ်သောချက်တင်အတွက်၊သန့်ရှင်းဖော်ရွေအခန်းပေါင်း။ အပြုသဘောအတွေးစေနိုင်ရန်အတွက်စကားပြော။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ:ချစ်ကြည်နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာျရန်လို-အတွက်၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများ။
မုန့်ဖုတ်မယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်စစ်မှန်သော-အသက်အရွယ်ရှိလူများ ။ သင်ငြီးငွေ့ဖြစ်ခြင်းအွန်လိုင်း-သာအထိသင်ချင်အဆုံးမှအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ကြကုန်အံ့။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ရုံသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့နှင့်အတူဘေဂျင်း၊၊ ကြင္း၊၊၊၊ ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပန်းအစစ်အမှန်အဆက္အ ၊ပဲချင်ချက်တင်အွန်လိုင်းနှင့်စစ်မှန်သောတယ္။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊အခမဲ့သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖြစ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်း။
ချက်တင်အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းဝက်ဆိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဘယ်မှာတက်ဘ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံအ ၊လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်သင်ပုဂ္ဂလိကစကားပြောေပးပါလက်ငင်းစာတိုပေးပို့၊ဖန်တီးနှင့်အမြင်နှင့်အတူပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံ၊ပိုခံယူအော့ဖ်လိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ပန်ကာနှင့်အနှုန်းလူ၊ရအီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုအခါသင်ကြိုက်သူတစ်ဦးဦးနှင့်အသုံးျအွန်လိုင်းေပးပါကင်၊နှင့်ပို။ အခြားအခမဲ့ချက်တင်ဆိုဒ်များ၊သင်တို့ပြုရမယ်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုနှိပ်ပါမဝင်ခလုတ်ကိုစတင်က်ပ္ချက်ချင်းမရှိမှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆော့ဝဲ။ ချက်တင်ပေါင်းစပ်အခမဲ့ဘ်နှင့်အတူအခမဲ့စကားပြောသို့သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်လွှာကိုသင်ရှိသည်ပိုပြီးပြန်လာမယ့်အထပ်ထပ်။
online chat rolet Android
လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ ချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ၁၀၀၀ အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ချိန်းတွေ့နှင့်အတူဖုန်းနံပါတ် တွေ့ဆုံရန် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း အကောင်းဆုံးချက်တင်ကစားတဲ့ ချိန်းတွေ့အခမဲ့။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ကမ္ဘာ လက်ထပ်ဖို့လိုလားတွေ့ဆုံ